ယာဉ်ဖြင့် လှည့်လည်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်
အစားအသောက်လိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း (အစားအသောက်များတည်ခင်းရောင်းချခြင်း)(နိုင်ငံခြားသား)
အစားအသောက်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ခြင်း (နိုင်ငံသား/နိုင်ငံခြားသား)
လုပ်ငန်း လိုင်စင် (အသစ်) လျှောက်ထားခြင်း (ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ရောင်းချခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်း၊ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ဝန်ဆောင်မှု၊ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများနှင့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ) (နိုင်ငံသား)
လုပ်ငန်း လိုင်စင် (အသစ်) လျှောက်ထားခြင်း (ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ရောင်းချခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်း၊ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ဝန်ဆောင်မှု၊ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများနှင့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ) (နိုင်ငံခြားသား)
MIC လုပ်ငန်းများ လိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း (နိုင်ငံသား/နိုင်ငံခြားသား)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ကားအရောင်းပြခန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ(ကလေးကစားကွင်း)လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း)(အသစ်)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ/ဆေးခန်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (မူကြိုကျောင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း(အခြေခံပညာရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များအတွက်)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ဘာသာစကားနှင့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းများအတွက် လိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ဆံပင်ညှပ်နှင့်မျက်နှာနှင့်မျက်နှာအလှပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ကျန်းမာရေးခြေထောက်ဆေးစိမ်လိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (မျက်မမြင်အကြောပြင်လိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း)
လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ခြင်း
တည်းခိုခန်းလိုင်စင် (သက်တမ်းတိုး/အခန်းတိုး/လျော့ လျှောက်ထားခြင်း)
ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင် (အသစ်) လျှောက်ထားခြင်း
ကိုယ်ပိုင်ဈေးလိုင်စင် (အသစ်) လျှောက်ထားခြင်း
ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်များနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းရှင်အမည်ပြောင်း၊ လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်း၊ လုပ်ငန်း အချက်အလက်ပြောင်းခြင်းများအတွက်
လိုင်စင် ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးသဖြင့် မိတ္တူ လျှောက်ထားခြင်း
အထွေထွေ (လုပ်ငန်းအလိုက်လိုအပ်သည့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ထောက်ခံချက်များ)
လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် တပ်ဆင်ထားသည့်ဆိုင်းဘုတ်(လိုင်စင်နှင့်တွဲဖက်၍ ဆိုင်းဘုတ်)လျှောက်ထားခြင်း(အသစ်/သက်တမ်းတိုး)
လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ဆေးခန်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း)
ရက်စွဲ : 16-10-2021
လုပ်ငန်းတည်နေရာကို မြေပုံပေါ်တွင် Pointer ရွေ့လျားပြီး ပြသပေးပါရန်!
လုပ်ငန်း အသေးစိတ်အချက်အလက် *
-- လိုင်စင်အမျိုးအစား အားလုံး -- လုပ်ငန်း လိုင်စင်အစားအသောက် လိုင်စင်တည်းခိုခန်း လိုင်စင်ဘော်ဒါဆောင် လိုင်စင်ယာဉ်ဖြင့် လှည့်လည် ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်ကိုယ်ပိုင်ဈေး လိုင်စင်
Passport No. (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်)
၁ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ / ကတန ကမတ ကမန ခတဒ ခဖန ခဘဒ ဆဒန တနန နမန ပကတ ပညန ပတအ ပဘတ ဗမန မကက မကတ မကထ မကန မကရ မခဘ မဂဒ မစန မညန မထန မဘန မဘပ မမန မအန ရကန ရနက လခန လဂန လမန ဝမန သတန ဟခန ဟပန အခက အဂယ အပန ဥမန ( နိုင် ဧည့် ပြု ယ )
ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ *
လျှောက်လွှာ အခြေအနေစာရင်း ပေးပို့နိုင်ရန်
လုပ်ငန်းရှင်၏ အချက်အလက် ပြောင်းလဲခြင်း
တည်းခိုခန်း အချက်အလက် ပြောင်းလဲခြင်း
ဘော်ဒါဆောင် အချက်အလက် ပြောင်းလဲခြင်း
ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် အချက်အလက် ပြောင်းလဲခြင်း
ပြောင်းလဲလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်၏ အချက်အလက်များထည့်ရန်
* မှတ်ချက် - အချက်အလက်ပြင်ဆင်လိုသည့် ပူးတွဲလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်
ယခင်အချက်အလက်ဟောင်းများကို ပယ်ဖျက်လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင် စာရင်းတွင်ထည့်ပြီး
ပြင်ဆင်လိုသည့် အချက်အလက်အသစ်များကို အသစ်ထည့်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင် စာရင်းတွင် ထည့်ပါ။
လုပ်ငန်းတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ခံချက် လိုအပ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ စာရင်းတွင်မပါရှိက အသစ်ထည့်ရန်
ပြောင်းလဲသည့် လိပ်စာ ဖြည့်စွက်ရန်
ပြောင်းလဲလိုသည့် လုပ်ငန်း အသေးစိတ်အချက်အလက်
ပြောင်းလဲလိုသည့် တည်းခိုခန်း လုပ်ငန်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များထည့်ရန်
မိသားစုခန်း အရေအတွက်(အိမ်သာ/ရေချိုးခန်း)(တွဲ) *
မိသားစုခန်း အရေအတွက်(အိမ်သာ/ရေချိုးခန်း)(မတွဲ) *
ပြောင်းလဲလိုသည့် ဘော်ဒါဆောင် လုပ်ငန်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များထည့်ရန်
ရောင်းကုန် အမျိုးအစား *
*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.pdf ဖိုင်များသာတင်ရန်
( Maximum size: 2MB, Maximum limit: 30 Files )
(က) အမည်တူ Attach ပုံများတင်ပါက နောက်ဆုံးပုံကိုသာ အတည်ယူမည်။